बैंकक वेश्यालयमा बितेका रातहरु – Nepalilink
बैंकक वेश्यालयमा बितेका रातहरु
भीम राई अक्टोबर १६, २०२०
कप्तान प्रशान्त राईको हैकममा उडेको आर ए ४०१ को एयरबस ‘ए ३२०’ सुवर्ण भूमि विमानस्थलमा उत्रिँदा अपरान्हको सूर्य अन्डामान सागरको आकाशमा रुमलिइरहेको थियो ।
साढे तीनघण्टा अगाडि मात्रै संसारको अति कम विकसित राष्ट्रको जोखिमपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि अति सुविधा सम्पन्न विमानस्थलमा पुग्दा मनभित्र किन किन खिन्नता पैदा भइरहेको थियो । एअरबस विमानस्थलमा उत्रेपछि निम्बु घाँस र पाक थाइको मिश्रित सुगन्धसँगसँगै तेश्रोपटक बैंकक अध्यागमनलाई हामीले कछुवा गतिमा पार गरिरहेका थियौ । त्यसपछि मेरो अनन्त यात्रामा सदैव साथ दिने जीवन संगीनीसँग एक एक वटा सुटकेस गुडाउँदै गुडाउँदै अध्यागमनबाट यात्रु प्रतिक्षालय हलमा पुगेका थियौं ।
अप्रतिष्ठित मौसमको आँधीबेरीसँग विमानमा आएको हलचलले आकुल ब्याकुल बनाउँदा हामी जानुपर्ने होटलको नाम नै भुलिसकेका थियौं । त्यसैले प्रतिक्षालयमा रहेको कुर्सीमा थचक्कै बसेर होटलको नाम पत्ता लगाउन मोबाइलमा भएको विद्युतीय पत्रहरूलाई कोट्याउन शुरु गरेका थिए । किनभने होटलको अग्रिम आरक्षण मैले आफै गरेको थिइनँ, छोराले लण्डनबाट गरिदिएका थिए ।
विद्युतीय पत्रहरू खोलेर होटलको नाम पत्ता लगाएपछि एउटा ट्याक्सीलाई समातेर हामी होटलतर्फ लाग्यौं । हाम्रो होटल लगभग ५० हजार बेश्याहरूको रमाइलो वस्ती रहेको मध्य बैंककमा अवस्थित थियो । हामी बैंकक पुग्दा त्यहाँको मौसम अति सफा एवम् आकर्षक थियो ।
त्यति रमाइलो मौसम भएपनि घरीघरी शियामको खाडीबाट उत्पन्न भएको दृश्यहीन चिसो बतास चोपराय नदीमा ठोकिएर हाम्रो गालासम्म आइपुग्दा झन् आनन्दित हुने गर्दथ्यो । एक घन्टा जतिको रमाइलो यात्रापछि हामी तिनै चोपराय नदीको किनारमा रहेको होटल ‘अर्बना साथ्रोन’ पुगेका थियौं ।
मनभरि सयकडौं कौतुहल बोकेर होटलमा पुग्दा ताराको मुहार चन्द्रमाको किरणले झै प्रज्वलित बनेका थिए । ट्याक्सीलाई बिदाइ गरेपछि मुस्कानको भूमी भनेर लब्धकीर्ति कमाएको थाइल्याण्डको पाँचतारे होटल अर्बना साथ्रोनमा हामीले पहिलो कदम पार्यौ ।
मुख्य ढोकाबाट भित्र पस्ने वितिक्कै स्वागत गर्नेले थाई मुस्कानसहित, ‘तपाईहरूलाई अर्बना साथ्रोनमा स्वागत छ,’ भन्दै हामीलाई फूलको थुङ्गाले स्वागत गरेकी थिइन । उनको त्यति आकर्षक मोहडा र कामोतेजक जिउडाल देखेपछि कृष्ण बनेर मैले सुस्तरी ‘धन्यवाद’ भन्दै उनलाई जवाफ फर्काए । हाम्रो राहदानीको पानाहरू पल्टाएर हेरेपछि कम्प्युटर पटलबाट उनी उठिन र हिँड्दै म उभिरहेको ठाउ नजिकै फेरि आइपुगिन् ।
‘दृश्य मात्र हेर्ने हो कि केही खानेकुरोको पनि ब्यवस्था गर्ने हो ? मलाई त भोक लागि सक्यो ?’ नदी र सहरको दृश्यवलोकनले मन्त्रमुग्ध भएर भावनामा बहिरहँदा अचानक ताराको विषालु आवाज मेरो कानमा बज्र्यो ।
तैपनि तारालाई कसरी खुशी बनाउने होला भनेर मेरो दिमागलाई थोरै अभ्यास गराए । पलङको नजिकै बिजुली कित्ली थियो । तिनै कित्लीमा भरि पानी उमालेर हामी दुवै जनाको लागि एक कप चिया बनाएँ । टेवलमाथिको बिस्कुटका केही टुक्राहरूसँगै उनको अगाडि चिया राखिदिएँ ।
तातो तातो चिया र बिस्कुटले मास्तिर लागेको थर्ममिटरको पारो सुस्तरी ओरालै ओरालो झर्न थाल्यो । त्यसपछि मैले पनि एक कप जसमिन चिया हातमा लिएर पुनः बार्दलीमा निस्केर कुर्सीमा आरामले बसें । अनि बैंककको गगनचुम्वी महलहरूलाई दोश्रोपटक नियाल्न थालें ।
‘खानु, पिउनु, घुम्नु र यौन मात्र मेरो जिन्दगीको परिभाषाभित्र पर्छन,’ भन्ने कुरो जिमले मलाई बैंककको वेश्यालयमा बताएका थिए । उसको त्यस्तो विचारलाई मैले केही हदसम्म स्वीकारोक्ति जनाए । कमिलाहरूको तातिमा हुने सँक्षिप्त भेटघाट झै हाम्रो पनि छोटो भेटघाट भयो ।
केहीवेरपछि तिनै बैंककमा भेटिएकी केटी साथीलाई उसले सर्लक्कै अँगालोमा बाँध्यो । अनि उनको वक्षस्थलमा दाहिने हात मज्जाले आराम गरायो । त्यसपछि केटीसँग आइरिस भट्टीपसल भित्र छिरयो । हामीले सडकको पेटीमा उभिएर रोमियो जुलियटको जस्तो जीवित नाटक त्यतिबेला हेरिरह्यौ । त्यसपछि तारा र म क्रमशः गन्तब्यहीन यात्रातर्फ अगाडि बढ्यौं ।
भट्टी पसलहरूको रातो बत्ती र सडक किनारमा बलेका चहकिलो बत्तीको प्रकाशले बैंककमा रात र दिन छुट्याउन हम्मेहम्मे पर्दथ्यो । केही समयपछि समलिङ्गीहरूको बार ‘पिङ्क प्यान्थर’ र ‘ड्रिम ब्योइ’ लाई हामीले आस्ते आस्ते पार गरयौं । त्यहीँबेला हाम्रो सामुन्ने लगभग साठीको दशकमा पुगेका जस्तो देखिने एक जना तालु खुइले अङ्ग्रेज बुढो देखा परयो ।
बायाँ हातमा बियर समातेर त्यो बुढो दुईजना चुकचुकाउँदो उमेरका वस्त्रविहीन युवतीहरुको बीचमा नव दुलाहा झै भएर बसिरहेका थिए । वेश्यालयको युवतीहरूले भन्दा पनि उसले लगाएको ‘पोर्न हब’ गन्जिले अचानक मेरो ध्यानाकर्षण गरयो । त्यति फटाहा गन्जीले उसको ह्याकुल्लो छोपीरहेको देख्दा बुढोले कहाँ भेटाएछन् भनेर मेरो कदम केही बेर टक्क रोकियो ।
हाम्रो भेट भएको केही मिनेटभित्रै उसको जीवन कहानी बमन गर्न थाल्यो । पारपाचुके गरेर वैवाहिक जीवनबाट सन्यास लिएपछि आनन्ददायी समागमको लागि संसारको सबैभन्दा उत्तम स्थान बैंकक हो भन्दै उसले मलाई उत्तम सल्लाह दिन थाल्यो । ‘गेरविन, तपाई असाध्यै भाग्यमानी हुनु हुने रहेछ । जस्ले गर्दा तपाईलाई एक्कै साथ दुई दुई जना कामोतेजक युवतीहरू मिलेछन् ।’ भन्दै मैले तालु खुईलेलाई जिस्काइदिएँ ।
‘थाइल्याण्डमा एक मिलियन युवतीहरुले काँचो मासुको ब्यापार गर्छन् । अझै संख्या त्यो भन्दा उभोउभो होला ? निश्चय नै तिमीले पनि एकजना भेटिहाल्नेछौ । किन त्यति चाँडै सुर्ता गर्छौ ?’
उसले सहानुभूति प्रकट गर्दै मलाई जवाफमा फर्कायो ।
नेपोलियन बोनापार्टले भनेका उक्त हरपहरू बैंककको वेश्यालयमा पुगेर मैले झलझली सम्झिरहें । अनि भूमिगत रेलबाट निस्केर केहीबेरमा नाना प्लाजा होटलको अगाडि पुगेका थियौं । अनि त्यहाँका प्रत्येक भट्टी पसलहरूबाट निस्केका ठुल्ठुला सङ्गीतका आवाजहरू सडकसँग ठोकिएर प्रति ध्वनीमा परिणत भएका सुन्दै सुन्दै हिँड्यौ । हामी केहीबेरमा ‘टेम्प्टेसन गो गो’ बारलाई छाडेर ‘ट्रेप बार’ नजिकै पुग्यौं ।
लखौरीहरूले आफ्नो सामुन्ने परेका कुनै पनि पुरुषलाई लटर पटर अङ्ग्रेजी भाषामा, ‘म तपाईसँग रात बिताउन चाहन्छु,’ भन्ने सुनौलो वाक्यांशहरू छाडेका हाम्रो कानसम्मै यदाकदा आइपुग्ने गर्दथ्यो । कलङ्कीत नाना प्लाजाको कुनाबाट युवतीहरूले आफ्नो शरीर बेच्नको लागि आफैले मोल मोलाइ गरिरहेको रमाइलो दृश्य त्यहाँ देख्न सकिन्थ्यो । आफ्नै आँखा अगाडि त्यस्तो बिलोकनीय दृश्य देखेपछि –
सन् १९७७ मा अमेरिकन पूर्व बायु सेना टिजी एडवार्डले त्यहाँ पहिलो भट्टि पशल खोलेका थिए ।
उसले बाचिन्जेल सम्म आफ्नो भट्टी पसलमा काउबोइ टोपी लगाएर ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । उसको मृत्यु पश्चात रात्रीकालिन यात्रा लेखक बर्नाड ट्रिङ्कले त्यस ठाउँको नाम सोइ काउबोई राखेर लेखहरू प्रकाशन गर्न थाले । चालिस वटा जति भट्टी पसलहरू र लगभग १५० मिटर जति लामो दुरीमा रहेको लखर लखर पैदल यात्रा गर्न मिल्ने तिनै सानो गल्लीलाई कालान्तरमा गएर ‘सोई काउबोई’ भन्ने गरियो ।
सुकम्भित रेल स्टेसन बाट हामी त्यहाँ पुग्ने बितिक्कै चार पाँचजना युवतीहरूले सोई काउबोईमा स्वागत छ भन्दै उनीहरूको भट्टी पसलमा बोलाउन थालेका थिए । अति सुष्मबस्त्रले जीउ ढाकेको युवतीहरुको आकर्षक शरीरले त्यहाँ जुनसुकै पुरुषको मन सहजै जित्न सक्दथ्यो । उनीहरूको स्वागतलाई बेवास्ता गर्दै हामी केही अगाडि बढिरह्यौ ।
त्यहाँको सबैभन्दा प्रख्यात ‘सहारा बार’ अगाडि पुगेर केहीबेर टक्क अडियौं । अनि गुलावी रङ्गको विकीनी लगाएको बारमा काम गर्ने युवतीहरूलाई राम्ररी हेरिरह्यौं । उनीहरूलाई हेरि रहँदा भट्टी पसल भित्रबाट आएको विशाल सङ्गीतले गल्ली थर्किरहेको हामीलाई आभास हुन्थ्यो ।
हामीले केहीवेरमा ‘सुजि वङ’ लाई पार गरयौं । ‘कन्ट्री रोड’ भट्टी पसल बाहिर सडकपेटीमा राखिएको कुर्सीमा एक–एक गिलास वाइन समातेर बस्यौं । अनि वत्तीको प्रकाशले प्रभाव पारेर विचित्रसँग टल्किएको कामोत्तेजक तरुनीहरूको रमिता आँखा दुखिन्जेलसम्म हेरि रह्यौं । केही समयपश्चात् हातमा चाङ वियर लिएर हाम्रो छेऊमा एकजना कुहिरे पनि हामीसँगै बस्न आइपुगे ।
हाम्रो परिचयको क्रममा उसको नाम जोन मर्फि भन्यो । ऊ डब्लिन, आएरल्याण्डबाट त्यहाँ घुम्न आएका थियो ।
यद्यपि वेश्यालय र भट्टी पसलको राम्रो ब्यवस्थापन गरेको हुनाले थाइल्याण्डले ६.५ बिलियन डलर वर्षेनी राजस्व असुल्ने गरेका छन् । तपाई आफै विचार गर्नुहोस, हरेक वर्ष बेलाय बाट मात्र १ लाख पर्यटकहरु थाइल्याण्ड आउने गरेका छन् । प्रत्येक हिउँदमा सोई काउबोईमा अनुहार देखाउने जोनले त्यहाँ भएका सबै गोगो बारहरूको कथा हामीलाई मज्जाले सुनाइरह्यो । धेरै बोलेर ऊ थाकेपछि मैले एक सिरिप वाइन पिएर –
मेरो प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा, तपाईलाई जुन युवती मन पर्छ, त्यो युवतीसँग समय बिताउन सक्नुहुनेछ । तर सबैभन्दा पहिले मन परेको युवती छानेर भाउ मिलाउनु पर्छ । त्यसबाहेक युवतीले बार छाडेकी बारको जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ । अनि युवतीलाई आफूले चाहेको ठाउँ टोकियोको जस्तै ‘लभ होटल’ तिर लान पाइन्छ । तर एउटा कुरो याद गर्नुहोला, त्यहाँ देखिएका सबै युवतीहरू थाइहरू चाँही होइनन् । कुनै कुनै चाइनिज, भियतनामिज, लावोसियन र रसियनहरू पनि हुन् । तपाईलाई सायद थाहा नहुन पनि सक्छ । थाइल्याण्डमा रसियन वेश्याहरूको संख्या मात्र पाँच हजार भन्दा बढिरहेका छन् ।
बेलायतमा बस्दै आएका लेखक पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हुन् ।